Mabhichi akanakisa muChina | Kufamba Nhau
Maria Jose Roldan | | China, Beaches
Kana vanhu vachifunga zvekuenda kuzororo kumahombekombe, chinhu chakajairika kufunga nezveakakura maSpanish kana emahombekombe eEuropean. Kune avo vanoda shanyira mamwe mahombekombe ari kure Unogona kusarudza kubhuka nendege uye kuyambuka Gungwa reAtlantic rese kuti uone mabhishi muLatin America kana United States. Asi wakambofunga nezve kuziva mabheji eChina?
Tine nyika inoshamisa inotipa makomo akanaka, nzvimbo dzakanaka nemabhishi anotora mweya wedu. Nyika yedu inozivikanwa se "nyika yeblue" nekuda kwechikonzero. Nekuti gungwa rebhuruu rinozivikanwa munyika medu uye chaizvo pasina mvura, paisazove nehupenyu. Saka, tinofanira kuremekedza makungwa edu uye imwe neimwe yemakona ayo Amai Chairo anotipa muPasi redu rinoshamisa.
Asi nhasi ndinoda kutaura newe nezve mamwe mahombekombe iwe aungave usina zvakanyanya mupfungwa asi izvo zvine mukurumbira kumamirioni avanhu. Ndiri kureva mahombekombe akanakisa muChina. Nekudaro, kana rimwe zuva ukasarudza kuenda kuChina pazororo, iwe unozoziva kuti une anopfuura 18.000 makiromita emhenderekedzo yegungwa kunakidzwa.
1 Nyika yakashambidzwa nemakungwa
2 Gungwa muHainan
3 Liaoning Gungwa
4 Guangxi Gungwa
5 Shandong pamhenderekedzo
Nyika yakashambidzwa nemakungwa
Nyika yakashambidzwa neGungwa reBohai, Gungwa Dzvuku, Kumabvazuva neSouth China Gungwa neSouth Seas. Ndosaka ukaenda kuChina parwendo haukwanise kurasikirwa nemukana wekushanyira mahombekombe ayo anonyanya kukwezva pfungwa dzako, nekuti kana iwe ukafunga kushanyira ivo vese, zvirokwazvo waisazove nenguva yekukwanisa kufamba nzendo dzayo dzese dzakakura. .
Mhenderekedzo iyi iri pachitsuwa chinotonhora chinowana zita rimwe chete nemahombekombe: "Hainan" uye hapana mubvunzo nzvimbo inokodzera vashanyi yekushanyira wega kana nemhuri. Kunyangwe iwo akanakisa maparadhiso mahombekombe muCaribbean anogona kuenzanisa.
Iri gungwa rakakura kwazvo uye rakakamurwa kuita matunhu, saka zvinodikanwa kuti iwe uzvizive kuitira kuti ugone kuzvimisikidza pachako zvakanaka. Semuenzaniso, unogona kuwana Sanya nzvimbo iri muchikamu kumaodzanyemba kwemahombekombe uko iwe kwaunowana nzira dzine miti yemichindwe yekufamba-famba uye jecha jena izvo pasina mubvunzo zvinokwezva kutarisisa kwako, kunyanya kana iwe usina kujaira jecha rakachena pamhenderekedzo!
Kumabvazuva unogona kunakidzwa nemakiromita manomwe emahombekombe munzvimbo inonzi Yalong Bay, asi kana izvo zvauri kutsvaga runyararo saka uchafanirwa kuenda kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwegungwa uchienda kunharaunda yeLuhuitou. Izvo zvakakwana pakuzorora zvakakwana!
Asi zvakare unogona kuenda kuchitsuwa cheDadongha icho chiri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kunakidzwa nechitsuwa chakazara paradhiso. Chinhu chakashata ndechekuti inogara yakatsvikinyidzana nekuti idiki kwazvo, asi zvakakodzera kuti uishanyire!
Liaoning Beach iri mudunhu rezita rimwe chete, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweChina. Mudunhu rino unogona kuwana akati wandei maguta uye rimwe rawo rinokwezva zvekushanya sezvo riine zvakawanda zvinokwezva uye mahombekombe anoshamisa, Ndinoreva guta reDalian.
Kana iwe uri kuenda parwendo nemhuri uye uchida kuziva gungwa rakakodzera munhu wese, saka uchafanira chete famba makiromita mashanu kubva kuDalian uye enda Bangcuidao Juggu gungwa. Kana iwe usingazive pekugara, unogona kuzviita kuBangcuidao Binguan Hotel sezvo gungwa iri muminda yayo. Chinhu chakangoshata ndechekuti kuti ugone kusvika kumahombekombe iwe uchafanirwa kubhadhara 2 euros nekuti ndeyako wega.
Kana iwe uchida kuenda kune dombo pamhenderekedzo iwe unogona kuenda kuTiger Beach, iyo yakanaka kuswera uye kunakirwa nezuva uye negungwa. Asi kana iwe uchida kubhadhara zvishoma kuti uende kumahombekombe asi usina kuwandisa, zvichiri kufanira kubhadhara 5 yuan kuti upinde Fujiazhuang Beach kana Golden Stone Beach, asi hazvisi pasi pemakiromita makumi matanhatu kubva kuDalian, kuitira kuti uve kurendesa mota kana kutsvaga chekufambisa chevoruzhinji chinokutora kuenda ipapo ndokuzokutendera kuti udzokere kwaunogara.
Kana zororo rako rakagadzirirwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina, saka unogona kuenda kudunhu reGuxi sezvo mahombekombe ayo asingakusiye usina hanya. Iine mahombekombe asinganzwisisike uye akanakisa muChina yese, kungoita izvo zvakakosha kushanyira dunhu rino. Anenge makiromita gumi kubva pakati peguta reBehaihai unogona kuwana mahombekombe akareba anenge makiromita maviri. Iwe uchafanirwa kubhadhara matatu maeuro kuti uwane iyo asi zvakakosha. Kunyangwe zvingave zvakaoma kuti iwe unzwisise kuti nei uchifanira kubhadhara kuti upinde mumahombekombe, asi inzira yekudzivisa kuwandisa uye kugona kugara uchigara mune yakanaka uye nekuzvichengetedza zvakakwana.
Unogona kuwana aya mahombekombe kumabvazuva kweChina uye kana iwe ukaenda kune yekufambisa agency ivo vanokuudza zvechokwadi nezve Qingdao nekuda kwekuwanda kwayo kwevashanyi. Muguta rino, Chinese uye European mapurani musanganiswa. Muna 2008 yaive nzvimbo yemitambo yeBeijing yeOlympic, saka unogona kuwana pfungwa yekukosha kweguta rino. Mukuwedzera uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, ine isingasviki pamatanhatu emahombekombe ane mukurumbira aunogona kushanyira kana iwe uine rombo rakaringana kuenda parwendo kuguta rino rakanaka.
Pakati pemahombekombe anozivikanwa pane Bathing Beach Iyo ine nyore kuwana sezvo iri padyo nechiteshi chechitima. Asi kana iwe uchida kuenda kumberi zvishoma, unogona kutora chikepe woenda kuYellow Island kana HUang Dao, nzvimbo dzakakodzera zvakanyanya (nekuda kwekuchena kwemvura uye nekuzara kudiki) kutora bhati rakanaka.
Izvi ndizvo mamwe emahombekombe ane mukurumbira iwe aunowana muChina uye kuti zvakakodzera kushanya. Asi kutanga kwezvose, ndinokuraira kuti uwane pekugara padyo nemabhichi aunoda kushanyira uye kuti uzive nzira yekuwana yega yega. China yakakura kwazvo uye zvakakosha kuti uve nenzira yekuenda kunzvimbo dzakadzorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Mabhichi akanakisa muChina
Mapaki enudist eEnglischer Garten muMunich